Uzuzu DMAA ukwu (13803-74-2) Nsukka - Phcoker Chemical
Nzuzu 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) (13803-74-2)
Raw 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) uzuzu bụ .......
ikike: 12400kg / ọnwa
SKU: 13803-74-2 Category: ibu Loss
Nzuzu 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) (13803-74-2) video
Nzuzu 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) (13803-74-2) Nkọwapụta
Product Name Raw 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) ntụ ntụ
Chemical Aha 4-methylhexan-2-amine, DMAA, Dimethylamylamine, 1, 3-DMAA, Geranamine, Methylhexaneamine, 3-Dimethylpentylamine, Forthane
molekụla Fnhazi C7H18ClN
molekụla Wasatọ 151.67752
Nkịtị Monoisotopic 115.136 g / mol
Mgbu Point 120-130 ° C
Ọkara Ndụ nke Ndụ DMAA nwere ọkara ndụ nke 8.4 awa iji tụnyere naanị 5.4 awa caffeine, na oge oge nke 0.14 awa na 0.37 awa maka caffeine.
Sume Na mmiri, 1.5X10 + 4 mg / L na 25 deg C (bụ)
Antinye Dị ka ihe mgbakwunye nri na-akpali akpali ma ọ bụ ume
raw 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) ntụ ntụ (13803-74-2) Nkọwapụta
1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) bu ihe omimi nke amphetamine nke emere ahia n'oru egwuregwu na ihe ndi na-efu ya, otutu ndi eji ere ihe dika nri. Dị ka usoro usoro nchebe nke etiti (CNS) dị egwu, DMAA na-eme ka ume dị ike dị ka caffeine, mana ọ na-arụ ọrụ dị iche iche. Ọ bụ ezie na usoro DMAA na-eme ka ike ghara ịdị ọkụ abụghị 100% ụfọdụ, ihe ka ọtụtụ ná ndị nchọpụta kwenyere na DMAA na-akpali noradrenaline (norepinephrine) na ụbụrụ.
A na-akpọ 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) dị ka methylhexanamine ma ọ bụ geranium wepụ, Otú ọ dị, FDA adịghị ama ihe ọ bụla sayensị a pụrụ ịdabere na ya na-egosi na DMAA dị adị na osisi. Ọ bụ ezie na a kwadoro DMAA n'otu oge ka ọ bụrụ ọgwụ maka nkwụsị nke ntanetị, a naghịzi akwado ya maka ojiji a, ọ dịghịkwa eji ọgwụ DMAA eme ihe nke ọma taa. DMAA, karịsịa na ihe ndị ọzọ na-akpali akpali dị ka caffeine, pụrụ ịbụ ihe ize ndụ nke ndị na-azụ ahịa. Iwepu DMAA ntụpụ nwere ike ịmalite mgbali elu ọbara na-eduga ná nsogbu nke obi na-esite na mkpụmkpụ nke ume na ume na-agbanye obi n'ime nkụ.
1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) uzuzu (13803-74-2) Ngosipụta nke Action
Nnyocha ọmụmụ banyere ahụike nke DMAA ntụ ntụ na 1940s na 1950s gosipụtara mmetụta mmetụta uche nke ọmịiko na-emetụta omume nke epinephrine na akụkụ abụọ na-emetụ n'ahụ na nhụjuanya nhụjuanya. Ndị a na-agụnye mmụba nke ọbara mgbali elu n'ihi nrụgide nke arịa ọbara ọbara, ụba ụba nke ụbụrụ na-akpata mmetụ na-amụba n'ọbara shuga.
Vasoconstriction - arịa ọbara n'ime imi ga-amachibido iwu ka obere ọbara wee ghara ịdọrọ obere ihe. Nke a bụ usoro eji ọsọ OTC na-agba ọsọ dịka oxymetazoline (Afrin) na n'ezie dị irè. Otú ọ dị, e mesịrị wepụ Forthane site n'ahịa n'ihi nsogbu ndị dị mkpa gụnyere isi ọwụwa, egwu, na ọbara mgbali elu. Ihe ndị a nwere ike ime n'ihi na DMAA dị ka amphetamine ma dị ka a rụpụtara, ụlọ ahụ abụghị naanị onye na-ahụ maka vasoconstricting ma ọ bụ usoro nhụjuanya nke na-akpali akpali (CNS).
uru nke 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) (13803-74-2)
DMAA na-enyere aka melite ncheta oge dị mkpirikpi na ihe omume reflex
Enyemaka DMAA na-akwado abụba
DMAA na-akwalite ike
DMAA nwere ike melite arụmọrụ anụ ahụ
DMAA meghariri uche na mmụba na-elekwasị anya
DMAA na-eme ka obi dịkwuo elu na obi ụtọ
DMAA kwalite ikike ime uche
DMAA na-amụbawanye ike, na-elekwasị anya na mkpali
-atụ aro 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) uzuzu (13803-74-2)
Ntụziaka a kwadoro nke 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) dị na 10-20mg na njedebe ruo 40-60mg kwa ụbọchị, ọ dịghị ihe àmà ọ bụla iji kwado usoro a ma ọ dị ka ọ bụ ihe usoro dosages maka 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) na ahịa. Enwere ụfọdụ ụzọ:
25mg gbakwunyere 25Mg 30min mgbe ọ gwụchara mbụ
50mg na nri
50mg efu afo
50mg DMAA raw ntụ ntụ tinyere iko nke kọfị efu afo.
Mgbe ị na-eji ụzọ mbụ na nke abụọ, ị nwere ike ọ gaghị eche mgbanwe ọ bụla n'ihi na elekwasị anya bụ obere.
Mgbe ị na-eji ụzọ nke atọ na nke anọ, DMAA ntụ ntụ ga-enye gị nnukwu elekwasị anya na itinye uche ma bulie ọnọdụ gị elu. Mmetụta gị ga-adị ukwuu. N'ezie, ụzọ nke anọ nwere ike ịdị mma n'ihi na ọ ga-adị irè karị.
Ụzọ ọzọ bụ iwepụta 25mg nke DMAA ntụ ntụ abụọ awa mgbe ị nụsịrị 50mg. Nke ahụ ga - abụ ụzọ ọjọọ, ọ ga - eme ka ị nwee obi ụtọ ma nwee obere isi ọwụwa. Ụfọdụ ndị ọkachamara nwere ahụmahụ na-atụ aro ka dose DMAA ghara ịbịaru 75mg na oge 24, ọ kachasị mma ịghara iburu 75mg n'otu ụbọchị.
mmetụta nke 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) (13803-74-2)
1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) uzuzu enweghi nchedo mgbe ejiri ya. Ebe ọ bụ na a na-eche na ọ na-arụ ọrụ dịka ihe na-akpali akpali, enwere nchegbu na ọ nwere ike ime ka ohere nke mmetụta dị oke egwu dịka:
Ọkụ ọbara ọbara
Mkpụrụ obi na ọbara mgbali
Nsogbu ọrịa obi.
Jiri ọgwụ ọjọọ na-emekọ ihe.
Obi mgbawa (obi arrhythmia)
Ngwakọta Ngwakọta Nicotinamide Mononucleotide (NMN) (1094-61-7)
Raw Nicotinamide Mononucleotide (NMN) uzuzu kwusiri uru uzo di n'umu aru ......
Nke a na-emepụta ihe ngwọta nke Alizyme maka ọgwụ na ibu na co-morbidities ... ..
Ngwuputa nke hydrochloride (DMBA) nke Raw 4-Methyl-2-pentanamine (71776-70-0)
Ngwuputa hydrochloride Raw 4-Methyl-2-pentanamine (DMBA), .......